Sirta Qarsoon ee Suuqgeynta Emailka iyo Bixiyeyaasha Adeegga Internetka | Martech Zone
Sir qarsoon ayaa ku jirta Warshadaha Emailka. Waa maroodiga qolka ku jira oo aan cidina ka hadlin. Cidna awooddo ka hadal iyada oo laga baqayo ciqaabta dadka ay u malaynayaan in ay booliiskeena ku ilaalinayaan.
SPAM MA LEH WAX LAGU SAMEEYO OGOLAANSHADA
Waa sax. Halkan ayaad ka maqashay. Waan ku celin doonaa…
Hal mar kale…
Laakiin Doug… maxaad leedahay? Taasi waa wax xun! Taasi waxay ka hor imaaneysaa waxa warshadaha oo dhami noo sheegaan. Waxay diidaysaa waxa ISPs noo sheeg. Waxay diidaysaa waxa ESPs noo sheeg. Xitaa waxay diidaysaa waxa aan ka ogaanay SPAM.
Runtu waxay tahay in SPAM uu yahay ma emayl aan la weydiin. SPAM waa ma emayl la soo diro bilaa fasax. Muxuu Basaastay is is aan loo baahnayn iimayl LA'AAN.
Maanta, waxaan iska diiwaan gelin karaa emayl ka imanaya ilo sumcad leh, oo la yiraahdo GOODMSG. Iyaga ayaa siiya iyaga fasax inay iimayl ii soo diraan had iyo jeer sida ay jecel yihiin, xitaa iyaga oo u oggolaanaya daabacaad wanaagsan, si ay iigu soo diraan dalabyo iyaga oo ka wakiil ah shirkadaha ay 'la ganacsadaan'
GOODMSG waxay ku siisaa cinwaanka shirkadooda email kasta.
GOODMSG waxay haysaa jawaab celin loo diyaariyey oo si otomaatig ah uga bixi doonta waxyaabaha aan loo baahnayn.
GOODMSG waxay si muuqata u soo bandhigeysaa iskuxirka ka saarida.
GOODMSG wuxuu awood u siiyaa dib u eegista DNS.
GOODMSG wuxuu khuseeyaa in lagu caddeeyo liiska adeeg bixiye kasta oo Internet ah (oo bixiya).
GOODMSG waxay diiwaangelineysaa Lataliyeyaasha Wax-samatabbixinta si loo ilaaliyo isgaarsiinta ISP-yada.
Kadib markaan helo 6 bilood ee emaylka, waxaan guji batoonka Junk Email ee ISP-kayga markii GOODMSG diro dalab curyaan ah. Macaamiisha kale ayaa sidaas oo kale sameeya.
Qiyaas maxaa jira?!
GOODMSG, oo ah xayaysiiyaha sumcadda leh, ayaa hadda noqday SPAMMER. Oggolaanshaha ku saleysan, laba-optin, u hoggaansamida CAN-SPAM, 1-guji ka-saarista… wax walba si sax ah ayey u sameeyeen, laakiin hadda iyagu waa SPAMMER.
SPAMMER ahaan, waxay kujiraan liiska madow. Cinwaankooda IP-ga ayaa hadda xiran. Macaamiishooda kale yaa doonayaa emaylku ma helayo. Sumcadoodii ayaa xumaatay. Waxaa laga yaabaa inay u wareegaan ESP cusub. Waxaa laga yaabaa inay u wareegaan cinwaan cusub oo IP ah. Waa inay wax qabtaan, maxaa yeelay emaylkoodu kama dhigi karo sanduuqa. Laga yaabee inay xitaa ganacsi ka baxaan. Dembigooda? Fariin daciif ah, oo aan la DHISAN.
Yaa eedda leh tan? GOODMSG? Macmiilku?
Cidda eedda leh ayaa ah Adeeg Bixiyaha Internetka, gaar ahaan, furaha Emailka bixiya ISPs - Yahoo !, Google, Live (Hotmail, MSN), AOL. Iyagaa eedda leh maxaa yeelay waxay ku fashilmeen inay naga difaacaan SPAM dhab ah. Waxay adeegsadaan nidaamyo sumcad xumo, ma wadaagaan xogta, umana siiyaan qalab ilo sumcad leh si ay u noqdaan wakiillo wanaagsan. Taabadalkeed, waxay iska indhatirayaan balaayiin iyo balaayiin e-mayl ah oo ay soo direen SPAMMERS-ta dhabta ah ee aan raacin qawaaniinta, dan ka lahayn sumcadda, dan ka lahayn rukhsadda, wareega cinwaankooda IP-ga oo ay dhaafayaan dhammaan jeegagga iyo dheelitirka in suuqgeyaal sumcad leh ayaa adeegsada.
Waxay aad ugu egtahay Calaamadaha Daroogada La-aan ee Dugsiga Sare ee maxalliga ah. Dadka kaliya ee ka madax banaan Daroogada waa dadka markii horaba ka caagnaa Daroogada. Ganacsatada daroogada ka ganacsada ayaa wali lugeynaya jidadka iyo laamiyada, iyagoo ku qoslaya calaamadaha markay marayaan.
Waxaan horay uga hadlay ogolaansho. Dhibaatada ogolaanshaha ayaa ah inaysan jirin wax nidaam ah oo loo hayo ISP-yada si loo hubiyo inaad ogolaansho bixisay. ESPs waxay ubaahan yihiin ogolaansho ahaan kala-joogsi kadhan ah khatarta gaarsiinta liidata iyo ka warbixinta emaylka qashinka ah. Si kastaba ha noqotee, ISP iyo ESP WELIGABA ma wadaagaan nidaamka oggolaanshaha.
Qof ayaa u baahan inuu bilaabo inuu weydiiyo sababta. Qof ayaa u baahan inuu ka jawaabo balaayiin farriimo SPAM ah oo si toos ah u socda halka emailada 'wanaagsan' aysan ka gudbi karin oo ganacsatadu dhib ku qabaan. ISPs waxay sii socdaan oo ku saabsan ogolaanshaha, ogolaanshaha, ogolaanshaha. Iyaga dan kama lihi ogolaanshaha… waxay kaliya daneeyaan inta qof ee gujinaya badhanka emailka qashinka ah. Intaasi waa inay la shaqeeyaan. Suuqgeeye ahaan, fariin xun ugu dir macaamiishaada, oo iska ilaali! Waa lagaa xanibayaa oo lagugu calaamadeeyaa SPAMMER waqti aan badnayn.
Maxay tahay in ISPs ay sameeyaan si ay ula dagaallamaan SPAM dhab ah
Sii API-ga Opt-In ee adeeg bixiye kasta oo Email ama Xayeysiiyaha doonaya inuu si mas'uuliyad leh ugu diro emayl.
La wadaag xogta Opt-In-ka ISP-yada kale si loo hubiyo in suuqleyda masuulka ka ah aan la ciqaabin.
Ka jooji SPAMMERS inay isticmaalaan ISP-yada si ay email ugu diraan! Ma ogtahay taas Mareykanku waa QAS-QAADKA ugu xun? Runtii ma waxaad ii sheegaysa inaanu heli karno ilmo sawir qaade ah saacado gudahood laakiin SPAMMERS ay shaqeyn karaan sannado? Waxaad ii sheegaysaa in qalabka la socodka uusan arki karin oo uusan joojin karin baaxadda weyn ee taraafikada?
Haddii aan dadka u oggolaado inay daroogo ku raraan baabuurkayga, xabsi ayaan ku jiri lahaa. Sidee ku dhacday in ISP-yada qaada SPAM aan lala xisaabtamin?
Bixi dariiq loo adeegsado emayllada si ay u noqdaan kuwa la damaanad qaado oo lagu soo diro sanduuqa. Emailku hadda wixii ka dambeeya ma aha hab isgaarsiineed oo labaad. Waxaan ku helayaa digniinta amaahda iyo digniinta bangiga sanduuqa sanduuqa. Waa wax aan laga fiirsan karin in emaylladan waligood ku dhex dhici doonaan galka Junk Email.
Haddii UPS, FedEx iyo USPS ay joojiyeen inay u soo muuqdaan bakhaarkaaga si ay u rartaan alaabadaada, waad dacwayn lahayd. Qof ayaa dacwad ku oogaya ISP si dhakhso leh maadaama uusan u keenin emayl ogolaansho ku saleysnaa oo uu raacay sharci kasta. Shirkadahaani waxay u baahan yihiin in lagula xisaabtamo qaskaan ay na geliyeen oo ay diideen inay naga baxaan.
Tags: samatabbixingaarsiinta emaylkagaar ahaanispemaylka qashinka ahshaandhaynta emaylka qashinka ahspam
Video: Whitehat SEO loogu talagalay Bloggers
Lambarka Boostada Blog 1,000 - Toos uga imanaya Techpoint!
Nov 9, 2007 at 3: 12 AM
Boostada weyn Douglas. Sii faafi!
Nov 9, 2007 at 9: 02 AM
Lagu heshiiyay. Nooc la mid ah dhammaan e-mayllada shaqo-yaqaaneed ee imanaya aniga. Argghhh!
Nov 9, 2007 saacadu markay tahay 1:39 PM
Tani waxay i xasuusineysaa maqaal ka yimid Maamulaha shirkadda Silverpop oo ku saabsan sida "oggolaanshaha" loogu beddelayo "filasho".
Nov 11, 2007 at 5: 43 AM
Boostada wanaagsan, in kastoo aan u malaynayo in bartaada # 4 ay kuu horseedayso waddo sibiibix ah. Haddii ISPS ay mas'uul ka noqonayso waxa ay macaamiishoodu diraan, waxay noqonayaan kuwo si xushmad leh ula macaamila macaamiishooda.
Ama, haddii si kale loo dhigo, kuma eedeyn kartid Adeegga Boostada bambooyinka boostada. Miyaad jeceshahay in Dell la xidho markii Hackers uu adeegsanayo laptop-kiisa si uu ugu dhaco akoon bangi? Miyay AT&T loo haystaa mas'uuliyadda dambi ay abaabushay taleefanka gacanta? Si aamusnaan ah maahan. Xambaaruhu waa inuusan mas'uul ka noqon wixii la qaadayo. Soo diraha waa.
Bal qiyaas haddii ganacsiyada ay biil u diri karaan kuwa wax yaqaan ee waxsoosaarka lumay. Iyada oo la adeegsanayo sharciyo xaq ah, awood leh (iyo: dhaqan gelin), Spam waa inuu noqdaa wax la soo dhaafay.
Nov 11, 2007 at 9: 14 AM
Taasi waa qodob aad u fiican, modifoo. Xaqiiqdii waxay noqon laheyd wax ujeedadu tahay in la caddeeyo. Haddii ISP ogaa waxay iibinayeen xawaare ballaadh ah si loogu isticmaalo spam, waa in lala xisaabtamaa.
Dabeecadaha sida kuwa lagu muujiyey balooggan ayaa dhab ahaan ah sababta ISPs suuqgeynta e-maylka booliiska: kuwa soo diro waraaqo aan la weydiin ay si indho la'aan ah u indho sarcaadiyaan hungurigooda oo ay aaminaan inaysan wax khalad ah samaynayn. Waxaan kuu hayaa war adiga, moron: qeexida spam waxay leedahay * waxwalba * oo ogolaansho lagu sameeyo. Dadka adiga oo kale ah waligood taas ma fahmi doonaan, in kastoo, taasi waa sababta ISPs ay kaliya ugu faraxsan yihiin inay ku xayiraan oo kuu daayaan inaad ka xanaajiso in si adag laguu sameeyo illaa lo'da guriga ka yimaadaan.
Rachel, waa inaad ka boodday booska oo dhan. Marka laga reebo qeybta moronka, ujeedkeygu waa sida saxda waxaad ka xanaaqsan tahay. Fadlan qaado waqti aad ku aqriso maqaalka DHAMMAAN.
May 22, 2016 at 3: 25 AM
Maqaal weyn. Hadda 9 sano ka dib xaaladdu way ka sii xuntahay. Sida aan u arko waxa aan aragno waa hay'ado waaweyn oo shirkadeed sida Google oo xakameynaya wax badan oo aan qabanno, dhahno ama ka fikirno. Tani waa culeyska fekerka faafreebka waxaana loogu talagalay in lagu joojiyo fikirka caqliga ah oo naga dhigo inaan liqno dhammaan borobagaandada iyo beenta ay mashiinnada shirkadaha adduunku rabaan inay nagu quudiyaan - iyagoo adeegsanaya Dowladaha "madaxbanaan" sida maamulkooda. Waxyaabo cabsi leh oo haddana si la yaab leh aad u maqashid wax yar oo arrintan looga hadlay. Inta badan - iduhu waxay umuuqdaan inay aqbalayaan dhamaanteed ilaa xadna waxay caabudaan Googles-ka aduunka ilaahay. Xaqiiqdii wax wanaagsani kama iman doonaan tan. Kuwaas oo ah kuwa suuqgeeya emailka sharciga ah - iyo kuwa ka diiwaangashan sababta oo ah waxay rabeen waxyaabaha ay ka kooban yihiin (yacni faa'iido, waxtar leh iyo awood siinta) nasiib wacan! Ganacsiyadaadii waa la burburin doonaa. Tirada guud ee shirkadaha caalamiga ah ee amorphouse MA rabaan in awood lagaa siiyo sinnaba. Oo markaa ma akhriyi doono oo keliya meelihii aad dirtay, waxay ka horjoogsan doontaa in la diro - khayaanada boostada ee dareenka dhabta ah ee ereyga.
Waxaa laga yaabaa in ganacsiyada khadka tooska ahi ay aqoonsadaan e-mayl kasta oo aan la soo dirin oo ay doollar dusha saaraan tusaale ahaan $ 1 halkii e-mayl dakhliga / qiimaha meheradda lumay oo ay ku dacweeyaan tallaabo heer caalami ah oo aan loo dirin. Taasi waxay ka dhigi kartaa inay fekeraan! Marka hadday dhahaan 10,000,000 e-mayl sharci ah looma gudbinayo adduunka maalin kasta sheegashada ma wiil baa isku dari doona?